Ahoana ny fametrahana modules ao amin'ny Odoo 8 | Avy amin'ny Linux
Isan'andro izay mandalo dia mino aho fa ODOO: Ny OpenSource ERP izay manome zavatra horesahina! dia safidy tsara indrindra hampiharina amin'ny ankamaroan'ny SME ary mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny orinasa manana mpampiasa sy fifanakalozana avo lenta, izay mahatonga azy io ho ERP azo ovaina amin'ny maodelim-pandraharahana, amin'ny iray fomba haingana sy tsotra ary azo ovaina.
1 Inona ireo fampiharana na modules ao amin'ny Odoo 8?
2 Ahoana ny fametrahana modules ao amin'ny Odoo 8?
Inona ireo fampiharana na modules ao amin'ny Odoo 8?
Misy karazany maromaro ny Odoo, amin'izao fotoana izao dia 11, fa ny 8 kosa dia ampiasaiko indrindra noho ny fisian'ny modely manokana ho an'ny maodelin'ny orinasako, na izany aza, ampirisihina hampiasa an'io kinova io izay mifanaraka amin'ny filanao ny teknolojia sy ny modules , ary koa ny fahafahany manavao.
Ao amin'ny kinova Odoo 8 rehetra dia misy ny tsenan'ny modules ahafahana mampitombo na manatsara ny fiasan'ny Erp, maro amin'ireo modules ireo no loharano malalaka sy malalaka, ny hafa kosa mitokana ary samy manana ny soatoaviny. Na inona na inona toetran'ilay modely, azo apetraka sy ampandehanana amin'ny fomba tsotra ireo, misy fiantraikany mivantana amin'ny fifanakalozana ERP sy ireo maody mifandraika amin'izany.
Module na fampiharana Odoo (fantatry ny fikambanana ho marin-toerana) dia hita ao amin'ny Odoo Apps, izay ahafahanao manivana azy ireo amin'ny kinova izay mifanaraka, ny faritra misy ny fiantraikany, ny vidiny ary ny toetra hafa izay ahafahanao mahita modules mamaha ny filan'ny orinasanao.
Ahoana ny fametrahana modules ao amin'ny Odoo 8?
Vantany vao nisafidy ny maody izay tianay hapetraka ao amin'ny ERP izahay, izay amboarinay amin'ny kinova Debian aorian'ny fampianarana Tsikelikely hananganana ERP sy CRM ho an'ny SME anao, miroso amin'ny fisintomana avy amin'ny fitoerany izahay, hisintona rakitra .zip izay tsy maintsy hofongarantsika, ny valiny dia ho lahatahiry iray na maromaro miaraka amin'ny anaran'ny modely.
Avy eo amin'ny mpandrindra Odoo dia tokony hampavitrika ny safidy teknikaMba hanaovana izany, miditra amin'ny admin izay alehantsika amin'ny safidin'ny mpampiasa, misafidy ny mpampiasa mpandrindra izahay ary manindry ny fanovana izahay, avy eo manisy marika ny safidy teknika ary mamonjy.
Ankehitriny miaraka amin'ny fifandraisana SFTP na SSH dia tsy maintsy mandika ny lahatahiry ny plugin izay alaina ao amin'ny lahatahiry isika /opt/openerp/odoo/addons avy amin'ny mpizara anay miaraka amin'i Odoo, raha tsy zatra ianao Mampifandray ary miasa amin'ny FTP amin'ny alàlan'ny terminal, ity dia azo atao tsotra izao amin'ny client ftp toy ny filezilla, araka ny aseho amin'ity pikantsary manaraka ity.
Aorian'ny dingana ataontsika hametrahana modules ao amin'ny Odoo 8 dia tsy maintsy miverina amin'ny menio admin Odoo misy safidy vaovao hiseho ny lisitry ny modules, izay rehefa manindry dia hanokatra varavarankely izay tsy maintsy hanamafisantsika ny fanavaozana azy. Amin'ireto dingana ireto dia efa tsikaritr'i Odoo ny fisian'ilay modely.
Raha hametraka sy hampandeha ilay maody resahina, dia mankany amin'ny kiheba modules eo an-toerana izahay, esory ny safidy sivana mifanaraka amin'ny «Fampiharana an-tserasera«, Ary izahay mitady ilay modely miaraka amin'ny anaran'ny lahatahiry ao aminay odoo_web_login, tsindrio ny dingana farany amin'ny safidy hapetraka.
Amin'izany isika dia afaka mankafy modules an'ny antoko fahatelo ao Odoo, afaka miditra ihany koa ny safidy modules eo an-toerana isika ary mametraka ny lisitry ny rindranasa an-tserasera, fa ny ankamaroan'ny fotoana dia kely dia kely ity lisitry ny fampiharana ity raha ampitahaina amin'ilay iray. aseho amin'ny fampiharana Odoo.
Ny valin'ny fampiatoana ny maodely ampiasaina ao amin'ny ohatra dia interface grafik vaovao fotsiny ho an'ny Odoo Login, araka ny hita eto ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fametrahana modules ao amin'ny Odoo 8
Tsy efa loharano misokatra ve ny Odoo? Raha ny zavatra azoko vakiana dia manidy ny kaodin'izy ireo amin'ny faritra maro izy ireo ary tsy misy na inona na inona maneho fa tsy ny fironana hanidy azy io tanteraka. Ho fanampin'izay, nanova ny politikan'izy ireo ho an'ny kinova maimaim-poana izy ireo, izao dia Module iray ihany no azonao ampiasaina, ho an'ny ambiny sisa dia mila mandoa famandrihana ianao. Talohan'izay dia nomena kinova feno sy maimaimpoana ho an'ny mpampiasa 2 ny vondrom-piarahamonina.
Tsy milaza aho fa safidy ratsy io, saingy tokony tafiditra ao anatin'ny naoty izany rehetra izany.
Maimaimpoana tanteraka ny kinova 8.
androngo, mbola manana fanontaniana momba ny Odoo 8 aho ary raha, satria ny vondrom-piarahamonina sy ny orinasa ihany no mitazona azy io, satria efa ao amin'ny Odoo 11, dia tsy ho very ny fifanarahana amina modely marobe atsy ho atsy? Ary anontaniako izany satria toy ny taloha ny orinasa Odoo dia nanova filozofia ary nanomboka nanidy ny kaody.
Tsy fantatro fa ny kinova loharanom-baovao misokatra farany dia mbola voatazona mavitrika hatrany, azonao atao ve ny milaza fa ity kinova ity dia hitohy ho toy ny fork ho safidy mety mandritra ny taona maro? Ny fampiharana rindrambaiko an'ity karazana ity izay maharitra fotoana hahalalana azy dia hadisoana iray izay taty aoriana noho ny tsy fikojakojana ny fikolokoloana dia voatery novaina aorian'ny 2 taona. Izany no atahorako afaka mifidy ny Odoo 8 anio.
Azonao valiana ve aho amin'ireo fanontaniana roa ireo?
Odoo dia mbola vondrom-piarahamonina amin'ny endriny rehetra, na dia marina ary ireo farany tsy manana fahazoan-dàlana agpl, dia malalaka sy malalaka ny tontolon'ny fampandrosoana, fa izy ireo kosa afaka mankafy fampiharana tsy miankina. Ity dia lalao niadiana be tamin'ny resaka fahazoan-dàlana, satria ny kinova faha-8 no hany malalaka tanteraka, na izany aza, ny kinova hafa dia afaka manohy mivoatra tsy misy olana ary manana vondrom-piarahamonina somary mavitrika izy ity.
Ny kinova orinasa dia manana fampiasa sy add-ons izay mifandray bebe kokoa amin'ny fanohanan'ny Odoo amin'ny maha orinasa azy fa tsy amin'ny kaody code aza. Izaho manokana dia mino fa ny iray amin'ireo kinova misy ankehitriny dia azo ampiharina tsy mila kaody mifehy.
Odoo 8 manokana dia maimaimpoana tanteraka ary manolotra vondrom-piarahamonina izay manavao azy io hatrany, miaraka amina fampiharana an-jatony na an'arivony manerantany.
Ao amin'ireo kinova hafa dia azo ampiasaina kokoa ny teknolojia ampiasaina (na dia ankehitriny dia miaraka amin'ny python 3), noho izany ny fampiharana azy na tsia dia raharaha ilainao manokana. Ny mety hitranga amin'ny Odoo 8 dia ny tsy fananana modules vaovao, ny tena zava-dehibe dia ny hisokatra hatrany ireo modules ankehitriny noho ny olan'ny fahazoan-dàlana.
Mahafinaritra ny Odoo! Mila miasa eo ianao mba hahatsapanao ny fahafaha-manao azy. Mahamenatra fa ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy manome lanja sahaza ny vahaolana maimaim-poana. Niaraka tamin'i Odoo nandritra ny roa taona izahay, miampy ny fitambaran'ny LibreOffice sy ny biraon'ny tranokala Google, faly fotsiny izahay.
Indraindray dia mihoatra lavitra ny orinasa amin'ny maha mpanjifa azy, fa amin'ny rafitra misy kosa izay manjaka ny hevitry ny fenitra apetraky ny mpilalao lehibe ... Toy ny Samsung sy ny telefaoniny ...
Tiako ilay naoty.
Saingy mangataka fanampiana aminao aho, amin'ny maha purist tsara azy (tsy tsara ny ho, fa haha ​​aho) an'ny GNU / Linux. Folders? Fitiavana! Izy ireo dia lahatahiry !!! Miaraka amin'ny hatsikana che.
Tena matotra, misaotra noho ny fampidirana, tena tsy fantatro akory ny momba ny odoo. Manadihady.
Marina ny anao, ary nohavaozina ilay lahatsoratra, misaotra betsaka tamin'ny fanitsiana sy ny fandraisana anjara contribution
RaúlSO dia hoy izy:
Misaotra betsaka, tsy fantatro fa tsy hita ilay modely raha tsy rehefa manao fikarohana amin'ny anarany ianao, ary lasa adala aho, nieritreritra aho fa olana hafa io.
Valio i RaúlSO